MUUQAAL Khayre “Ciddii aan dowladda garab istaagi karin waa in ay ka joojiso oo kaliya Dhibaatada” Arin muhiim ah | Kalshaale
MUUQAAL Khayre “Ciddii aan dowladda garab istaagi karin waa in ay ka joojiso oo kaliya Dhibaatada” Arin muhiim ah
Feb 12, 2018 - 13 Aragtiyood
Muqdisho (Kalshaale) Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xassan Cali Kheyre oo khudbad ka jeedinayay munaasabad casho sharaf aheyd oo xalay xarunta dowladda hoose ee Xamar loogu qabtay mas’uuliyiinta dowlad gobolleedyada ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya hormarka .
WAA SAX LKN MA DAWLADNIMAA IN MIISAANIYADDA DFS AY NOQOTO MUSHAHAR KA WAZIIRADDA & AFARTA AGTAAGAN!!!?
DFS WAA PROJECT UU LEEYAHAY GUUMAYSTE MICHEAL KAETING & INTA KU ADEEGATA EE AY UGU HOREEYAAN UK & USA.
)(SOMALIYA WAA MASHRUUC)
Rasalwasaare kalsooni isu yeel, hooska shimbirahaad ka shakisaa.
Tankale jooji kharashka aad ku qasaariso TV dacaayadaha iyo hees amaantaa ii qaada.
waxad kubiirtay xisbiga qaswadayaasha aka dowlad diidka
Khaatumo Hanoolaato, ‘WAA SAX’ waxaan ka bartay AUNTE Dhoodane. DALMIDA. WBT
Warkaadii ugu fiicnaa wuxuu ahaa Dowladda dhexe kama taliso Goofkeyga (Dhulka Khaatumo ) dheefna igama qaado.
Wuxuu iila muuqdey war gar ah
“” Shilinka dhanka kale u rog) Banaadir iyo Shabeelooyinka
Cuqdo waxaa qabo ninka Saxaraha dhigtey JIIMBAARTA KULA EKE,ee Salaanta KULA EKI laqaato Madaxweynaha
Ee xataa diidey in loo sharciyeeyo Qubada Bari.
” Maxaad ku soo kordhisaa dowladda Banaadir State oo aan ka aheyn inaad Basaasto”
** Adoo Dudun saaran inaan kaala Doodo Boondheere waa ii doqonnimo**
Somaliya,maba jiro wax la mucaaridaa,wax laga soo horjeesta Iyo wax lagu kala qaybsamaa.
Moyaan in lagu jiro dagaalka hunguriga,laakiin wax la mucaariidaaba ma yaalo Somaliya.
Waxaa yaala dood ah,bal in Somaliya nabad lagu soo celinkaro,bal in Somalidu wada shaqaynkarto Iyo bal inay Somalidu is aaminkarto.
Waxa ka jiraa Somaliya waa”anarchy”.
Umad aan lahayn wax kala haga.
Tulo walba ay calan taagato oo lays wada haysto.Maxkabad laga maarmay Iyo Tuugta oo haysa gacanta sare.
Xamar ayaa uGu dhaw degaan Somaliyeed oo ay dawladnimo ka hana qaado,iyadna way ku adagtahay inay 4 sano ku fuliso nidaamka dawlada – si looga baxo nidaam la’aanta.
Waxaa muuqda inuu Gu’gii guusha Somaliyeed da’ayo.
Waxaa muuqda inuu Gu’gii Somalinimadu curtay.Waxaa muuqda inuu Gu’gii nabadu ina hadheeyay.
Iyo Gu’gii dawladinimada oo onkodaya.
Somaliyey intaan kaliya garta; Mr BaHaL “Xamar ayaa uGu dhaw degaan Somaliyeed oo ay dawladnimo ka hana qaado,iyadna way ku adagtahay inay 4 sano ku fuliso nidaamka dawlada – si looga baxo nidaam la’aanta.
Waxaa muuqda inuu Gu’gii guusha Somaliyeed da’ayo. Waxaa muuqda inuu Gu’gii Somalinimadu curtay.Waxaa muuqda inuu Gu’gii nabadu ina hadheeyay.
Dadmida. ⁉SAX. WBT
Mr kheyre waa nin ay ka muuqato dhiiranaan hal adeeg waxaan aaminsanahay hadii jaanis lasiiyo in uu meel fiican wax geyn karo
@ Mr bahal salaan gooniya Mudane qaamuus
Hadalkaagu waa daawo loo baahan yahay war nin yohoow armaan xamar kuu dirnaa waxaad iila muuqataa mid wax kusoo kordhin karo somalida cusub
XANIINYEY DHOCAARTAA MAANTOO KALE WAA MUHIIM IN HELLO QOF FIKIRKIISU CAFIMAAD QABO
Igama aha in aan Xamar amaano e waa aragtidayda Iyo cashar uu wakhtigu I baray.
Garoowe oo nabad ah 30 sano.HARGEISA oo nabad ah 30 sano,wax soo kordhiyeen ma jirto oo aan ahayn qabill Iyo in shisheeye loo adeego.
Laakiin Xamar oo nabad noqtaa waa Somaliya oo nabad heshay.
Muqdisho oo dhimatay waa Somaliya oo dhimatay.
Dadnimada Somalidu Muqdisho ayay ku xidhan tahay.
Xamar waan tagidoonaa hadii Ilaahay yidhaa,laakiin xagga jaamacadaha – gaar ahaan Tarikhda Somalida ayaan wax ku soo kordhindoonaa.
Waa runtiis ra’iisalwasaaraha dalka, Mr. Kheeyre hadalkiisa.
Daanyeerta Ceeyr iyo Sacad, hadii eeysan dowladnimada Somaliya taageereeynin, haka daayaan kaliya arbushka. Ahmed Macalin Fiqi, Cabdirahmaan Abdishakuur, Ceeyrow, Caato, Caydiid, Xassan Daahir Aweeys, doqomadaan ayaa reerahaan kazoo dhex baxay, kuwaas oo keenay in maantay 28 sanno kabacdi, oo eey qori aanan caqli lasocon la’ordayeen, eey maantay dowlad diidnimo nooc kale ah idaacadaha kawadaan, iyaga oo aanan ogeeyn duulka eey u shaqeeynayaan, iyo xaarka eey dhigayaan maantay. Daanyeero.